Kylie Jenner no lasa zandriny indrindra tamin'arivony taona lasa teo amin'ny tantara
Ao amin'ny lisitr'ireo miliara farany navoakan'i Forbes, dia gaga ny olona nahita fa i Kylie Jenner, 21 taona, no lasa mpanao miliardera tanora indrindra namboarina tamin'ny tantara tamin'ny vola mitentina 1 miliara dolara ho an'ny cosmetika marika Kylie. Tamin'ity indray mitoraka ity, Kylie Jenner dia nanapaka ny mpanorina Facebook Mark Zuc ...
Ahoana ny fomba fanadiovana ny borosy makiazy
Ny diovina makiazy vehivavy dia tokony diovina matetika mba hisorohana ny fitomboan'ny bakteria. Ka ahoana ny fanadiovana ny borosy makiazy? Misy fomba roa hanadiovana ny borosy makiazy, ny iray fanasana vovoka, ny iray fanasana rano. Vovoka / fanadiovana maina ny vovo-totoina Sasao ny vovon-tsavony amin'ny vovony unt ...
Misy fomba 4 hanintonana aloky ny maso. Mahafinaritra ny manao sary araka ny karazana maso.
Ny tena tanjon'ny make-up dia ny fampiasana tombony feno sy hisorohana ny fatiantoka ary hanovana ny tsy fahampian'ny endrika tsotra. Ohatra, ny makiazy amin'ny maso, na dia tsy lehibe aza ny faritra ankapobeny, fa ny fampiasana ny lokon'ny makiazy dia be dia be. Azonao atao ny manintona ny maso voajanahary sy tsara tarehy ...
JOYO © Zo rehetra voatokana. Vokatra asongadina, Sitemap, Palette loko molotra, Lipotra Mini, Solomaso maso volamena, Eyeshadow tsara indrindra amin'ny crème, Lokomena savony, Lokomena sokola, Vokatra rehetra